﻿ इटहरीको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘पाँच वर्षमा सबै योजना पुरा गर्छौं ।’
इटहरीमा जनप्रतिनिधि चुनिएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । पाँच वर्षको समय लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले प्राथमिकतामा सडक र पूर्वाधारलाई राखेका छन् । तर विभिन्न ठाउँको आवश्यकताअनुसार केही फरक योजनाहरुसमेत छन् । एक वर्षको स्थानिय तहको विकासको प्रगती बारे न्यूजलयले इटहरीका विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रम सुरु गरेको छ । सोही क्रममा इटहरीको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर मगरसँग न्यूजलयकी सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
आजभोली विकास निर्माणको काममै उपभोक्ता समितीहरु गठन सम्बन्धमा ज्यादा समय खर्चिएको छ । गत सालको टेण्डर विधि प्रक्रिया अनुसार नपुगेर यो साल अहिले काम भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा टेण्डरको काम अगाडी सकिने र उपभोक्ताको काम छिटो हुने भएकोले १६ गतेबाट सम्झौताको लागि सुचना टाँस गरेर गरिएको छ ।
वडाको विकासको अवस्थाहरु कस्तो छ ?
वडाको विकास हेर्ने हो भने यो भन्दा अगाडी १६÷१७ वर्षको अवधिमा कर्मचारीबाट गरिएको कामहरु त सम्पूर्ण मिडियाहरुलाई थाहा भएकै कुरो हो । तथापि अहिले आएपछि एक वर्षको अवधिमा हरेक ठाउँमा ड्रेन, ग्राभेल, कालोपत्रे, तटबन्ध सबै अहिले समेटिएर लगिएको छ । वडा कार्यालयको लागि शिलान्यास गरिसक्यौँ । २ नम्बर वार्डमा खोप केन्द्र नभएको र जग्गाको व्यवस्था पनि गर्न नसकेको कारणले गर्दा गत साल बजेट फ्रिज भएर गयो । विद्यालयको जग्गामा खोप केन्द्र बनाउने भनेर एउटा समिति गठन गरेर अघि बढेका छौं । जसमा पनि नेपाल सरकारको सहयोग प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
वडाको के कुरालाई चाहिँ तपाईले प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
जनताले माग गरेको भनेको बाटो घाटो नै हो । कतिपय ठाउँमा ड्रेनहरु थिएनन्, अहिले बनाइएको छ । मुलबाटोलाई पिच बनाउने भनेर अवधारणा लिएको छ । ताल तलैया जाने कम्तीमा ३ किलो मिटर बाटोको लागि अहिले प्रदेश सरकारले एक करोड तीस लाख रुपैया बजेट छुट्याएको छ । तटबन्ध, सिडक कालोपत्रे नै प्राथमिकतामा छन् ।
कर्मचारीहरुको साथ सहयोग कस्तो छ ?
कर्मचारीले अहिलेसम्म राम्रै सहयोग गरिरहेका छन् ।
चुनाव अगाडी के के आश्वासन दिनु भएको थियो र के के पुरा गर्नु भयो ?
चुनाव अगाडी मैले नपुग्ने अश्वासन फालेको छैन । मेरै पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि अहिले सिरानीमै राखेर पनि हेरिराखेको छौँ । पाँच वर्ष सम्ममा घोषणा पत्रमा लेखेको सबै पुरा हुनेछ । वडा कार्यालय भवन बनाउने भनेर पहिलो बुँदामै छ, त्यो अहिले शिलान्यास पनि भइसक्यो ।
दोस्रोमा भनेको बाटो घाटोलाई नै प्राथमिकता दिएका थियौँ । अहिले आधा काम यो वर्षमै हुने सम्भावना छ । नगर स्तरिय बजेट १ करोड ६० लाख हामीले ड्रेन र कालोपत्रेमा खर्चिएका छौँ । वडा स्तरीय बजेट भनेको १ करोड त्यो ग्राभेल, ड्रेन र इन्टर ब्लकमा हामिले खर्च गरेका छौँ ।
वडाको विषयलाई प्रदेश सरकार समक्ष पनि राखिएको छ । संघिय सरकारमा जाने कुरो भन्ने त नगरपालिकाले नै राख्ने हो । एकैचोटि वडाले संघीय सरकारमा जाने भन्ने कुरो पनि आउँदैन नगरपालिकामार्फत् नै जाने हो ।
कालोपत्रे मात्रै गरेर विकास हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, बाल मैत्री वातावरण, अपाङ्ग मैत्री व्यवस्थापन, कृषिको विकास आवश्यक पर्छ । हामी सबै वडावासी मिलेर विकास गर्ने हो । त्यसैले एक अर्कालाई सहयोग गर्दै वडाका काममा सहभागिता जनाउँदै विकासको मुल प्रवाहमा सहभागि होऔं भन्छु ।